Umfazi wePisces - Pisces
Ulwazi malunga nomfazi wePisces x
Xa umfazi wePisces ewela eluthandweni, uya kuba ngumfanekiso weVenus ephakanyisiweyo kwiiPisces - evuya, ephefumlelwe kwaye enomdla. Ingqwalasela yakhe iya kuguqulelwa ngokukodwa kumxholo womnqweno wakhe, kwaye uya konwabela umzuzu ngamnye wokungxama kweemvakalelo eziphuphumayo entliziyweni yakhe. Nje ukuba azive ethandwa, uqala ukwenza njengomntwana omncinci, eqinisekile ukuba eli qabane linokuba nguLowo. Ukuhleka kwakhe nokuba nomtsalane kuya ngokuzenzekelayo xa esothandweni, kwaye uya kufumana amandla amangalisayo kwiimvakalelo zakhe, ngokungathi ihlabathi liyavakala. Ngamaxesha anengqiqo ebomini akhupha amandla akhe kuye kwaye iimvakalelo ziya kuhlawulisa iibhetri zakhe nokuba ubudlelwane buhlala ixesha elingakanani.
Umfazi wePiscesUkwabelana ngesondo
Umntu usenokuthi ungumntwana kancinane xa kuthethwa ngesondo. Uneentloni kunye novelwano, ngokuqhelekileyo uya kuzenza ngathi ungumkhohlisi okhululekile, ngelixa eneneni uya kuziva ehamba ze ngaphakathi rhoqo, njengokungathi umntu ukhangele ngaphakathi komphefumlo wakhe. Ukuze ukonwabele ngokwenene isini, ufuna iqabane anokwabelana nalo ngolwalamano lokwenene. Xa efumana umntu omenza azive ekhuselekile uya kuba nobuchule kwaye azame ngovuyo kwaye azame izinto ezintsha.
Lo ngumfazi oya kubambelela kubudlelwane ixesha elide njengoko limkhuthaza kwaye limenza azibuze malunga nesiphumo salo. Uhlala ebambelele kwiingcamango zothando lweplatonic, ngethemba lokuba imini iya kufika xa uthando lwakhe luya kuzaliseka ngendlela ethile yomlingo. Ukhetha olu budlelwane bukude, obungeyonyani xa esoyika ubunyani kakhulu, kwaye ngakumbi phambi kokuba abelane ngesondo. Njengomyuziyam, uya kuzisa inkuthazo kwiqabane lakhe, ngeemvakalelo zokwanela kunye netalente ekufuneka ilandele. Noko ke, uya kuyitshintsha ingqondo ngokukhawuleza kamsinya nje akuba eziva ecinezelekile okanye engahlonelwa, okanye uthando lwakhe lusuka luphele. Akunakwenzeka ukuthembela kuthando lwakhe, kwaye uhlala evulekile ukuba kunokwenzeka ukuba kukho umntu onokuthi amthande ngendlela engcono. Ukuba iqabane lakhe lifuna ukubambelela kuye, kungcono ukuba umyeke abe nguye kwaye unethemba lokuhle.
Ngaba unokumthembaUmfazi wePisces
Maxa wambi kuye kube nzima ukuba athethe inyani. Ukungaqiniseki ngendlela abasabela ngayo abanye abantu kunokumphazamisa kakhulu, kwaye ubume bakhe obuthe tye, obubuthathaka bumnika le mvakalelo yangaphakathi yokuba akayi kukwazi ukuzikhusela kumsindo okanye kunxunguphalo lomntu. Ngenxa yoku, ngokufuthi uya kuziva efuna ukunganyaniseki, ingakumbi xa eye watshiswa kuqhushululu olulunya izihlandlo eziliqela. Eyona ngxaki iphambili apha kukuba akathembi mntu, ngoko akanakuthenjwa. Ukuze amthembe kwaye amncede avuleke, kufuneka azive exhaswa ukuba athethe nantoni na okanye enze nantoni na ngokungathi yeyona nto ingokwemvelo ehlabathini. Ufuna umntu ongayi kumgweba, amngxolisa okanye abe nokusabela okumangalisayo kwizinto aza kuzithetha. Ukuba akafumani iqabane elinjalo, kuya kufuneka akhe ingqiqo yangaphakathi yokhuseleko kwaye alindele nantoni na evela kwabanye abantu ngaphandle kokwesaba.
Ukuthandana nalo mfazi kuya kuba mnandi kwaye kungalindelekanga, kunye nemisebenzi emininzi yokuyila kunye nemitsha endleleni. Kubalulekile ukuba akaziva ngathi nguye kuphela onika amandla kubudlelwane kwaye ufuna umntu onokulandela kwaye enze ixesha labo elichithwe kunye nokwanelisa ngakumbi. Uya kuba sisidenge ngenxa yothando, naxa esenza ngathi akanjalo, kwaye uya kuyithanda imihla yokuqala, izikhumbuzo kunye nazo zonke iintlobo zezihlandlo ezikhethekileyo. Kufuneka akhululeke enze njengoko eziva kwaye iqabane lakhe akufuneki libe ngqongqo kwaye lifune ukuba izicwangciso zabo ziqonde xa imeko inokuba itshintshile kuye.
UkuqondaUmfazi wakho wePisces
Eyona ngxaki inkulu ajongene nayo lo mfazi kukuziva engowaphi na. Ngenxa yesikhundla seLanga kulo mqondiso, umfanekiso kayise uphantse ucime. Mhlawumbi wayengekho ebomini bakhe, okanye unengqiqo, kwaye unobunzima bokufumana iqabane ukuze afezekise lo mfanekiso wendoda enamandla onke. Nokuba imeko ithini na, angalahleka, kwaye ekuphela kwendlela anokuthi ahlawule ngayo iiyantlukwano zakhe kukulandela uthumo lwakhe, nokuba yintoni na avakalelwa ngayo. Iqabane lakhe akufuneki limthintele kule ndlela, okanye ubudlelwane babo abuyi kuba sabakho.
Umfazi wePiscesUkuthandwa nokungathandwa
Uthambile, unovelwano kwaye unomdla, kwaye uya kumenzela nantoni na iqabane lakhe ngelixa esemathandweni. Uya kuphefumlela kwaye aphakamise, abhabhe ngaphezu kwamafu kwaye athathe abathandekayo bakhe kunye naye. Kwelinye icala, akathembekanga, utshintsha ngezona meko zincinci zimbi kwaye unokuluphelisa ulwalamano nangawuphi na umzuzu ukuba ufumanisa ukuba lulahlekelwe yinjongo yalo.
Ungasikhethela Njani Isipho SakhoUmfazi wePisces
Yiba nobuchule kangangoko. Mbhalele umbongo, mculele ingoma, funda ukudlala ifluti kwaye umothuse ngokucula ingoma yakhe ayithandayo. Mpeyinte umfanekiso wenu nobabini kwindawo anqwenela ukuyibona. Yenza ikholaji yemifanekiso yakho kunye kwaye uyifake kwifreyimu ukuze ayixhome eludongeni. Uyakonwabela i-perfume entle, kodwa xa ukhetha enye, thatha uvakalelo lwakhe lokujoja. Sonke isipho osikhethayo kumfazi wakho wePisces kufuneka sibe nobuchule kunye nothando, kwaye kufuneka uhlale uchitha ixesha elithile ucinga ngezimvo anokuthi azixabise kakhulu. Akunzima kangako ukumthengela into aya kuyithanda. Makube yimibalabala okanye imilingo, kwaye ubeke amandla akho kuyo.
Iiary Emanzini Isagittarius Ngena Iponti